Dowladaha Ku Mideysan Ururka IGAD Oo Goobjoog ka ahaa Heshiisa Ay Kala Saxiixdeen Dhinacyada isku Hhayay K/Suudaan -
HomeWararkaDowladaha Ku Mideysan Ururka IGAD Oo Goobjoog ka ahaa Heshiisa Ay Kala Saxiixdeen Dhinacyada isku Hhayay K/Suudaan
Dowladaha Ku Mideysan Ururka IGAD Oo Goobjoog ka ahaa Heshiisa Ay Kala Saxiixdeen Dhinacyada isku Hhayay K/Suudaan
Magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxaa lagu soo gaba gabeeyay shir aan caadi aheyn oo ay yeesheen madaxda dowladaha ku bahoobay urur goboleedyada IGAD.
Madaxweynaha Dowlada federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka qeyb galay kulankaas oo looga hadlayay colaada Koonfurta Suudaan, oo ugu dambeyn dhinacyadii isku hayay ay ku kala saxiixdeen heshiis.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Amb. Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka mid aheyd dalalkii sahlay inay heshiis gaaraan dhinacyada isku haya Koonfurta Suudaan.
“Aniga iyo wasiiu dowlaheyga waan ka qeyb geli jirnay shirarka lagu dhameynayay xasarada Koonfurta Suudaan, madaxweynahana sidaas ayaa loogu marti qaaday shirka, madaxda shirka ka qeyb gashay waxay amaaneen kaalinta Soomaaliya ee isbedelada geeska afrika”. Ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda.